Madaxweynayaasha Somaliya iyo Puntland oo kulamo xasaasi ah ku leh Garowe – Radio Daljir
Madaxweynayaasha Somaliya iyo Puntland oo kulamo xasaasi ah ku leh Garowe
Abriil 29, 2015 4:41 b 0
Arbaco, Abriil 29, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh oo ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa sheegay inay uga tashan doonaan Garoowe isaga iyo madaxda maamullada gobollad sidii dalka loo gaarsiin lahaa isku-filnaasho.
Xasan Sheekh iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada Garoowe si ay uga qaybgalaan wajiga labaad shir horay uga dhacay Muqdisho oo ay yeesheen madxda maamul-goboleedyada dalka qaarkood iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
“Ujeeddada shirka Garoowe waa in dowladda dhexe iyo maamul-goboleeda dalka ka jira ay ka tashadaan sidii looga wada qeyb-qaadan lahaa dhisidda dowladnimada Soomaaliya iyo in dalka la gaasiiyo isku-filnaasho buuxda oo ay dadka oo dhan ku mideysan yihiin,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa xusay in maamulllada gobollada dalka iyo dowladda dhexe ay iskaashi buuxa ka leeyihiin la-dagaalanka argagaxisada oo uu ku goodiyay inay Somalia oo dhan ka cirib-tiraan inta lagu jiro sannadkan.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaantood ugu baaqayaa inay meel uga soo wada-jeestaan cadowgooda iyo kan dowladdooda oo ah Al-shabaab, laguna taageero dowladda Somalia dagaalka ay kula jrto argagaxisada,” ayuu hadalkiisa ku daray madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhanka kale, madaxweyne Xasan ayaa Puntland ku amaanay dada\_\_\_\_alka ay ugu jirto soo dhaweynta Qoxootiga Soomaaliyeed ee dib ugu soo laabanaya dalka, isagoo xusay in dowladda dhexe ay soo dhaweynayso dadaal walba oo lagu soo dhaweynayo Qoxootiga kasoo cararaya Yemen oo ay dagaallo ka socdaan.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas oo isna hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha Somalia oo kaashanaya madaxda maamul-goboleedyada dalka uu wado dadaal iyo qorshe looga arrinsanayo sidii Somalia loo gaarsiin lahaa heer isku-filnaasho, muhiimna ay tahay in laga wada qeyb-qaato howshaas.
Maamulka Degmada Gaalkacyo oo ka warbixiyay xaaladda guud ee Degmada [DHAGAYSO]
Ciidamada Dowladda iyo AMISOM oo howl-gallo amni sugid ah kawada qaybo kamid ah Muqdisho